Kulo sikolo ukuba umlingana womntwana usanda kuvela, kuba kukho ithuba lokuvuselela ubudlelwane kunye noontanga (kungekhona kwintsimi). Kodwa indlela yokwenza inkokheli yeklasi umntwana ingelula kubazali. Imfundo yasemakhaya ibamba indima ebalulekileyo kule meko. Umntwana ukopisha indlela yokuziphatha (kuquka nemikhwa) yabazali bakhe, kunye nabantu abaphethe igunya lakhe.
Indlela yokwenza umntwana abe yinkokeli eklasini, indlela yokumfundisa ukuba acinge ngandlela abanye abantwana abambonayo, bambona njengenkwenkwezi yabo yokuhamba? Okokuqala, kubalulekile ukuvumela umntwana ukuba uluvo lwakhe luphawulekayo, ukuba uhlonishwa kwintsapho. Oku kuya kumnika ukuzithemba ngamakhono akhe. Siyazi ukuba ubuntu bungazikhuseli ababa yienkokheli.
Okwesibini, ukwenzela ukuba wenze inkokheli yomntwana, umntu kufuneka azichazele ngokwakhe ukuba kubalulekile ukuba ulungile, ukuchaza iingenelo, kodwa nokumxwayisa ukuba unikwe uxanduva. Akukho mfuneko yokwesaba eli gama, ngokuchaseneyo - ukulijwayele ekhaya, ukuhlawula nayiphi na into encinci. Ukususela esemncinci, umntu kufuneka azijwayele ukuzimela. Kwiiklasi zeprayimari, umntwana kufuneka akwazi ukunika ixesha: yintoni oza kuchitha ukufumana izifundo, ukuphumla. Izakhono ezifumanekayo umntwana uya kuthunyelwa esikolweni.
Inkokeli yeklasiti isoloko inomdla othakazelisayo. Ngoko ke abazali kufuneka bamfundise ukuba bathethe ngokuchanekileyo, soloko bephulaphule ukuphela kwengcamango yakhe, nokuba baqikelele ngaphambili - kuya kufundisa umntwana ukuba aziveze. Kufuneka uphinde ucinge ngomxholo wencoko. Kufuneka simenze abe ngumngcebisi othandekayo. Ukwenza oku, phuhlisa umntwana wakho: uye kumakhonsathi ahlukeneyo, imiboniso, i-cinema, ithala. Ngokwemvelo, musa ukuyikhupha khona. Ngoko ukuba akanalo uvakalelo lokugatywa, kufuneka ukuba afane nomkhankaso wokuqala. Ukwenza oku, qaphela ukuba ngaba esi sihloko, umveliso, ifilimu iya kuba nomdla kwixesha lakhe. Qiniseka ukuba uxoxisana naye ngephulo, buza ukuba yintoni eyammchukumisa ngakumbi. Unokongeza intetho ngolwazi olumnandi. Kwiiklasi eziprayimari, abantwana bafumana lonke ulwazi olufunyenwe kwihlabathi langaphandle njengeponji.
Inkokeli yomntwana ayifanele ibe ngumfundi obalaseleyo, kodwa ukuze afunde kakuhle kwaye alwele okulungileyo, kuba uba ngumzekelo wokulingisa eklasini. AmaBanga esikolweni oontanga bakhe bangumqondiso wobulumko bakhe, isalathisi sokwakha ubudlelwane. Ngokuqhelekileyo unokubona indlela abantwana abangayithandi ngayo abo bafunde nabo ngeziganeko ezithile zezenzo okanye izenzo, kodwa ngenxa yokuba zintathu. Sekunjalo, into ephambili kukuba inkokheli yeklasi inolwazi olutsha, olunomdla (kungabi ngathi luthembeke).
Ngokwemvelo, intloko yeklasi inokuthi ibonakale kwindawo yokusebenza ngokusebenzayo - akukho sikolo esikwaziyo ukuyenza ngaphandle kwayo. Kwakhona kufuneka akwazi ukunyengisa ingcamango yabanye, kwaye kwiimeko ezikhungathekileyo kwaye aphume kwimeko.
Kubalulekile kubantwana kunye nophuhliso lomzimba. Kuhlala kukho iingxabano apho umntwana engumholi weklasi - kufuneka akwazi ukukhusela ilungelo lakhe lokubizwa ngokuba yiyona nto ibhetele. Abantwana bayabahlonela kakhulu abo banokuzimela ngokwabo nangokwenyama, banike "utshintsho", bawakhusele ekuhlaselweni komnye "igundane".
Inkokheli yeklasi iyahlonishwa ngokukwazi ukufezekisa iinjongo ezibekwe. Umntwana kufuneka aqonde ukuba yintoni impumelelo efana nayo, indlela yokuhamba naye ecaleni, ngesandla. Ngaloo xesha kufuneka agcine ilizwi lakhe, ufeze umcimbi. Ezi mpawu "ziyalinywa" ekhaya. Kodwa kukufanelekile ukuchazela umntwana ukuba aziphathe njani xa engekho. Kwimizekelo yamagorha enkcazo ukufumana iindlela zokubuyela ekhaya, ukucacisa ukuba ubunzima kunye nokungaphumeleli kuthukuthela umlingiswa, ngoko ungayeki. Ngokuqinisekileyo, ngezinye iinkhathi inkokeli inqwenela ukulila isitya sayo, kodwa into eyona nto iyakubonisa ngayo, kuba unokuguqula utyhefu ube yinyosi. Indlela yokuphumelela yokuphumelela kukuguqula umqhubi. Ewe, ukuhlaziywa kwenkokeli yinkonzo ingumgangatho ongekeki.
Ukuba ufuna ukwenza inkokheli emntwaneni wakho, kufuneka uqikelele ngobuntu bakhe. Kumele asebenze ubunzima beliphi ubuchule: ukudweba, ukwenza umzimba, ukucula, ukudlala, njl. Kulo kuya kuba luncedo ukumthabatha. Mhlawumbi ukuqonda ukuthambekela kwakhe, hamba ngeembalo ezimbalwa. Ubuntu bubonakala kwiingubo. Ngokuqinisekileyo, akafanele athande ukungafuni ukuvakalisa izimvo ezivela kubafundisi, kodwa inkokheli kufuneka ibheke indlela ephathekayo, efanelekileyo. Iingubo eziduduzayo, njengabantu abadala, zinceda umntwana ukuba azive ethembele.
Enyanisweni, umntwana ukususela ebuntwaneni kufuneka asebenze ukuba abe ngumbindi wenkxalabo, kungekhona ukuba athathe umhlala phantsi kwiinkampani, ukuba angabi ukoyika uluntu kunye nokubonakala kowesidlangalaleni. Ngona nje ukuqokelela kwintsapho, kufuneka uyibeke ingqalelo kuyo, inhlonipho ngombono wakhe (nangona kubonakala kungenanto kwaye kukuhlekisa kuwe).
Xa uvakalelwa ngongoma wamandla, umntwana unokuqalisa ukusebenzisa "i-hangers-on" yakhe. Mfundise ukuba ahlukanise phakathi kwabo abahlobo bokwenene, kunye nokuxabisa izimvo zabanye. Ngokuqhelekileyo, ukuqinisekisile amagama ngezenzo zakho - bonisa uthando, uthando, akukho mzekelo ungamthobeli, ungayisebenzisi kakubi ngabantu abangabazi, udumise ngezenzo ezifanelekile ukudumisa. Ingqinamba efunekayo kukunxibelelana nosapho: umntwana kufuneka athembele intsapho, uzive inkxaso kunye nokukhuselwa, intsikelelo yobulumko behlabathi obuvela emlonyeni wakho. Kodwa ungagqithisi - kufuneka ubonise iindlela zokusombulula iingxaki kuphela kwiimeko ezilukhuni, ngaphandle koko kufuneka ugcwalise "iifom" zakho.
Abahlobo beSikolo abaqeqeshi abangcono kunabantwana, ngenxa yokuba abanenkani
Indlela yokuvukela: iingxaki zobutsha kunye neendlela zokuzisombulula
Ukuba awukwazi ukutshata ngesibini, kufuneka ndiyenze ntoni?
Indlela yokufundisa umntwana ukuba aphephe?
Kwiengozi zokutshaya kubafundi abaselula
Ukuzibulala komntwana: Yintoni eyenza bahambe ngenxa yale nto?
Ukuguqulwa kwesantya kwizinwele zeekati kubantwana
Ukuhlaziya iziqulatho zakho
Ukupheka inkukhu kunye namazambane kwihovini?
Ukukhethwa kweeflethi ezintle kunazo zonke ze-photo: I-Instagram: Sithatha imifanekiso njengenqanaba lobuchule 80
I-Easter cottage cheese
Iimbangela ze-asthma ye-bronchial
Ukusetyenziswa kweoli yegalikhi